Madaxweyne Shariif Xasan oo mar kale muujiyey xeelad siyaasadeed iyo aragti fog (faallo) – Radio Daljir
Madaxweyne Shariif Xasan oo mar kale muujiyey xeelad siyaasadeed iyo aragti fog (faallo)
Noofember 6, 2018 1:40 g 0
Ayada oo shalay la faafiyey warar salkoodu ahaa isla xafiiska Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aden ahaana in Madaxweyne Shariif uu maanta iscasili doono ayaan weli rumoobin. Faafinta warkaas oo hore Radio Daljir uga qoray faallo ku saabsan sababaha xanka “iscasilaadda” Shariifka ayaa hadda u muuqda in ay ahaayeen xeelad siyaasadeed oo uu Madaxweyne Shariif ciyaaray, kagana horimaanayo hagardaamooyinka siyaasadeed ee Madaxweyne Farmaajo la damacsanaa Madaxweyne Shariif Xasan iyo Dowlad Goboleedka Kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Shariif ayaa u arka loolanka siyaasadeed ee ka aloosan dowladda Koonfur Galbeed mid hadda noqday loollan qabiil, una dhexeeya musharrax Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), Wasiirkii hadda iscalisay ee Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha ee DFS, iyo Musharrax Mukhtaar Rooboow abu-Mansuur.
Musharrax Lafta Gareen ahna Xildhibaan Federal ayaa ah musharraxa Nabad iyo Nolol, waana musharrax haysta taageerada Madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa. Musharrax Lafta Gareen ayaana dhinac la dhiig ah Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa u arkay in faragalinta Madaxweyne Farmaajo iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay faragalinayaan doorashada Koonfur Galbeed tahay mid qabiileysan, khatarna ku ah amniga, miisaankii siyaasadeed iyo kan qabaa’il ee Koonfur Galbeed. Sidaas darteed asaga oo ciyaaraya siyaasad xeeladeysan waxa uu ka hordagay dhammaan musharrixiinta KGS iyo Madaxweyne Farmaajo.
Waa mar e Madaxweyne Shariif Xasan waxa uu marin been ah (misdirection) shalay u diray dhammaan inta xiisaysa siyaasadda Koonfur Galbeed asaga oo ilaha ka agdhow, kuwo shisheeyo iyo kuwa gudahaba, ay faafiyeen iscasilaad aan jirin.
Waa marka labaad e waxa uu Madaxweyne Shariif ka shaqeeyey Guddigga Doorashooyinka KGS iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka. Xalay waxaa iscasilay badanaa Guddigii doorashooyinka. Saacado kahor waxaa bayaan soo saaray Golaha Odayaasha Dhaqanka ay ku bayaaminayaan in doorashadii KGS dib loo dhigay khataro jira awgood.
Jirtaayo intaas baa hadana su’aashu waxay tahay “maxaa kulmiyey weedha iscasilaadda Madaxweyne Shariif Xasan iyo siyaasaddii KGS oo hal galin isdabamaryeysay?”
Jawaabtu waa xeeladda Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aden.
Sidaas darteed sida muuqata Madaxweyne Shariif waxa uu tilmaamay khataraha faragelinta Farmaajo ay daarantahay, iyo in ay horseedi karaan burbur ku yimaada dowladnimada Koonfur Galbeed, keeni karana in loo kala jabo saddex qaybood iyo ka badan iyo siyaasad qabiileysan.
Shariifka ayaa u muuqda in uu tilmaamay oo hadana ka digay khataraha siyaasadeed ee ku wajahan dowladda iyo deegaanka Koonfur Galbeed, muujiyeyna in uu yahay kan kaliya ee kala badbaadin kara qabaa’ilada Koonfur Galbeed.
Sidaas darteed mar kale waxa uu Madaxweyne Shariif Xasan muujiyey in uu siyaasadda kaga dheeranayo musharrixiinta KGS iyo waliba Farmaajo iyo Villa Soomaaliya, waxa la sugaana ay tahay waqtiga oo Madaxweyne Shariif Xasan loo kordhiyo.
Saas oo ay tahayna weli saadaashu ma qurux badna oo tan iyo markii la doortay Madaxweyne Farmaajo waxaa muuqaneysa in uu culayska ugu weyn ee siyaasadeed uu saaray burburinta dowladaha xubnaha ka dowladda Federaalka. Dowladda Hirshabeele iyo Madaxweyne Awaare ayaa ah maamul fadhiid ah oo aan shaqayn, haddana si toos ah u hoostaga Villa Soomaaliya. Galmudug ayaan iyana yeelatay laba Madaxweyne iyo laba gole wasiiro, qarkana u saaran dagaal qabiileysan. Dhanka Jubaland oo doorashadu ku beegantahay bisha Agoosto 2019 ayaa ayana gashay marxalad cusub iyo mucaarad mideysan, dhan qabiil iyo dhan siyaasadeed, oo looga soo horjeedo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Sidoo kale diiradda Madaxweyne Farmaajo ayaa ayana saaran Puntland oo haatan dhexda uga jirta loolanka doorashooyinka Xildhibaanada iyo kan Madaxweynaha oo la qaban doono bisha Janaayo ee sannadka cusub. Filo hardan adag.
Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aden oo la filayo in uu berri iscasilo iyo KG oo gashay marxalad cusub oo siyaasadeed
Siyaasadda & Dhaqaalaha 422 Wararka 14315
Golaha Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed: “Faragalinta DFS waxa ay sababtay in aan dib-dhigno doorashadii KGS” (bayaan)